Umlando wethu - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Funda isiNgisi noma isiFulentshi eCanada
Ngokusebenzisa amakilasi ashukumisayo, axhumana nabanye futhi agxile kubafundi.
Ukunikeza izinhlelo ezisezingeni eliphezulu kusukela ngo-1974Umlando wethu
I-BLI (Bouchereau Lingua International) yavula isikole solimi lwayo lokuqala ku-1976 eMontreal, eQuebec. Inhloso yalo kwakuwukunikeza ukuqeqeshwa kwebhizinisi kubaphathi abakhulu nabaphathi ezindaweni ezimbalwa nezindawo zobuchwepheshe. Ngokushesha ngemva kwalokho, i-BLI yaqala ukwamukela abafundi abavela emhlabeni wonke ukuba bahlanganyele ezinhlelweni zayo zokugwiliswa kwesiFulentshi nesiNgisi.
Njengoba sesungule idumela layo njengenkampani ehlanganisa ubuchwepheshe, emisha, kanye nesevisi yamakhasimende eyisibonelo, lesi sikole saphendula ngesidingo sokukhula kwamasevisi olimi futhi saqala ukuhlinzeka ngezinsizakalo zayo zokuhumusha eziphezulu kakhulu ezinkampanini zendawo nasemazweni angaphandle, ezivela emahhovisi ayo aqinisekisiwe nguhulumeni .
Abasebenzi bokufundisa abazinikele nabanentshisekelo, kanye nomoya wobungani nopholile, yisiginesha ye-BLI, ethole ngempumelelo enye ikhempasi enhlokodolobha yaseQuebec.
Ikhampasi yethu yaseQuebec City ivula indlela yokuqeqeshwa kwabafundi bamazwe aphesheya ngolimi lwesiFulentshi.
Kusukela lapho, i-BLI ibilokhu ivuselela indlela yayo yokuhlangabezana nezidingo nezidingo zabafundi. Kulezi zinsuku, i-BLI ingesinye sezikole zolimi eziqashelwa kakhulu emhlabeni futhi inikela ngezinhlelo ezahlukahlukene eziklanyelwe abafundi abavela kumasiko ahlukile nezizinda ezahlukahlukene.
Endaweni yezinsizakalo zebhizinisi, i-BLI ayigcini ngokuhlinzeka ngoqeqesho lolimi olwenziwe ngokwezifiso kepha futhi iletha izinsizakalo zolimi njengokuhumusha, ukuhlaziya, ama-workshops, njll. Amakhasimende ethu ezinkampani afaka izinkampani zamazwe ahlukahlukene njengeDeloitte, Coca Cola, Hydro Quebec, njll.
Ezinye izizathu zokufunda eBLIKungani i-BLI?
Iminyaka engu-40 yokuhlangenwe nakho
Ukuqaphela umfundi ngamunye
Ikharityhulam yekhwalithi ephezulu
Izinhlelo eziningi ezihlukahlukene
Izinsuku zokuqala ze-Flexible
Amakilasi Amancane Aqinisekisiwe Wempumelelo
Uhlelo lokusebenza olujabulisayo
Izindawo ezimbili eCanada
IMontreal neQuebec City
Sizungezwe zokudlela, izakhiwo cafe kanye zomlando
Izikhungo ezisezingeni eliphakeme
Amakilasi amancane anamuhla futhi anethezekile
Izinhlelo ezenzelwe wena
Izinhlelo zezilimi ezimbili
Imisebenzi yansuku zonke ngemuva kwesikole nokuhambela izimpelasonto
Isikhumulo sezindiza nokuyeka
Siza ngeVisa ne-CAQ
Umshuwalense wezokwelapha ophuthumayo
Izinketho zokuhlala ezahlukahlukene
Ukuhlolwa kolimi okuku-inthanethi